Xogtii ugu danbeysay ee shirka wada-tashiga qaranka | KEYDMEDIA ONLINE
Xogtii ugu danbeysay ee shirka wada-tashiga qaranka
Rajo fiican ayaa laga muujinayaa shir madaxeedka maalintii afaraad ka socda xaruntii ciidanka cira Soomaaliya ee Afisyooni, kas oo looga hadlayo xal u halidda arrimaha doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maalintii afaraad caasimadda Soomaaliya ka socda shirka wada-tashiga qaran ee u dhaxeeya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xi-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, Madaxweynayaasha maamullada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magalada Muqdisho.
Sida ay Keydmedia Online hore u qortay, shirkaan ayaa si weyn kaga gadisan kuwii ka horreeyey ee Farmaajo hoggaaminayay, waxaana Saddexdii maalin ee hore la xalliyay inta badan tabashooyinkii jiray, iyo qodobadii ka soo laabtay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray Muqdisho.
Qodobka ugu adag ee Wadahadalladaan ayaa noqday arrinta Soomaaliland, iyo xal u helidda khilaafka ka dhexeeya labada garab ee ay kala hoggaamiyaan Ra’iisul Wasaare ku xigeynka Xukuumadda xil-gaarsiinta Mahdi Guuleed iyo Gudoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi.
Hayeeshee, sida ay xaqiijinayaan ilo loo qaateen ah, arrintaa ayaa la xallilyay, labada dhinac ayaana ku qancay soo jeedintii RW Rooble, ee shalay, waxaana labada garab loo ka qeybin doonaa guddiyada doorasada.
Dhanka kale, waxaa la isla meel dhigay in dib loogu laabto guddiga doorashooyinka dadban, waxna laga badalo, labada heerba, sidoo kale aminga doorashooyinka ayaa la isla af-gartay.
Maalinta Khamiista ah ee socoto ayaa la soo gabagabeyn doonaa shirka, waxaana la diyaarin doonaa xafladda saxiixa oo ay ka soo qeyb gali doonaan dhamaan siyaasiyiinta, iyo ururada bulshada rayidka.